”cadowgu haka naxo Somaliland-na haku faraxdo,”madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. | Berberanews.com
Home WARARKA ”cadowgu haka naxo Somaliland-na haku faraxdo,”madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
”cadowgu haka naxo Somaliland-na haku faraxdo,”madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Hargeysa (Berberanews)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay xidhitaanka Barnaamujka shaqo qaran, ayaa ammaanay mashruucan, isaga oo taxay ujeeddooyinka iyo natiijooyinka laga doonayo barnaamujka qaran ee shaqo qaran.
Waxaana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, “Shaqo qaran waa xarunta aynu doonaynno inuu caqliga Somaliland ka shaqeeyo oo uu hore u mariyo, shaqo qaran waxa aynnu ka rabnaa inay dadku noqdaan qaar If iyo Aakhiroba wax taransada, shaqo qaran waxaynu doonaynaa inay dadku ka helaan waajibka uu qaranku ku leeyahay, isagana uu qaranku ka helo xuquuqda qaranku ka rabo, ujeeddada aynnu shaqo qaran u Aas-aasnayna waa tabobar maskaxeed iyo mid jidheed.”
Madaxweynuhu isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay in barnaamijka shaqo qaran ay kasoo aflaxeen guutooyin da’yar oo xooggoodu dihin yahay, kuwaas oo ay ka go’an tahay inay dalkooda horumariyaan,
Next articleItoobiya oo Somalia ka saartay khariirad cusub oo ay samaysay